Download WhatsApp maka mbadamba gam akporo, otu esi eme ya? | Gam akporosis
Mgbe ha ruru ụlọ, ọ dịghị ole na ole na-ahapụ ekwentị mkpanaaka na-atụgharị na mbadamba. Otú ọ dị, anyị na-eche ihe ịsụ ngọngọ ihu, WhatsApp maka mbadamba Ọ bụghị ewu ewu dị ka anyị chere, na agbanyeghị na ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ apụtala karịa oge, ị ga-enwerịrị ụfọdụ opekata mpe iji nwee WhatsApp maka mbadamba gam akporo. Ndị kasị ewu ewu bụ mbadamba nkume nke Samsung Samsung, ọ bụ ya mere budata WhatsApp maka Samsung mbadamba Okwesighi ịbụ ihe mgbagwoju anya, anyị chọrọ igosi gị otu esi eme ya.
Mbadamba ụrọ aghọwo ihe a ma ama na oge, ebe ọ bụ na mbata ha ka ụzọ anyị si emekọrịta na ihu gbanwere. Otú ọ dị, ha nọ na obere awa, iji nwayọọ nwayọọ na-amụbawanye nke ákwà nke smartphones emewo ka ọtụtụ ndị ọrụ na-esiwanye ịchọta obere ihe na mbadamba. Agbanyeghị, niche ndị ọrụ nwere ụfọdụ nke na-aga n'ihu ịnwe ya dị ka nhọrọ ntụrụndụ na iri ọdịnaya n'ụlọ, buru oke ibu. Ikekwe ọ bụ ya mere na enweghị onye nrụpụta nke ama mara mma nke na-enweghị otu ma ọ bụ karịa mbadamba nkume n'etiti ọkwa ya, yabụ anyị ga-egosi gị esi wụnye WhatsApp na mbadamba gam akporo.
1 Budata WhatsApp maka Mbadamba ụrọ n'efu
2 Esi wụnye WhatsApp na mbadamba WiFi na-enweghị SIM
3 Etu esi enweta WhatsApp na ekwentị mkpanaaka gị na otu mbadamba n'otu oge
Budata WhatsApp maka Mbadamba ụrọ n'efu
WhatsApp bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha, yabụ na anyị nwere ike iji WhatsApp mee ya n'ụzọ dị mfe. N'ihe banyere gam akporo, usoro ya mepere emepe nwere ọtụtụ uru, ya mere ọ dị mfe dịka gaa ukara WhatsApp website na ibudata na .apk WhatsApp iji wụnye ya na mbadamba anyị. Agbanyeghị na mkpebi ahụ nwere ike ọ gaghị adị mma, dabere na etu mbadamba nkume anyị ji eme ihe, a ga-echekwa ọrụ ndị bụ isi. Imirikiti mbadamba nkume agaghị ekwe ka anyị budata WhatsApp site na Playlọ Ahịa Google Play, ya mere, oge a ihe ọzọ zuru oke bụ ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị WhatsApp, na mgbakwunye, yabụ anyị jidere n'aka na anyị na-ebudata ụdị ọhụrụ ahụ. nke WhatsApp ozi maka mbadamba.
Ozugbo etinyere ya WhatsApp na gam akporo, usoro ahụ bụ otu ihe ahụ maka ngwaọrụ ọ bụla, nọmba ekwentị, tinye koodu ntinye, anyị nwere ike ịmalite ịkparịta ụka na ndị anyị na ha kpọtụrụ.
N'oge melite WhatsApp Maka mbadamba, usoro ị ga-agbaso bụ otu ihe ahụ na ngwa ọ bụla, ọ bụ ezie na ị nwere ozi ndị ọzọ na njikọ ahụ anyị hapụrụ gị.
Esi wụnye WhatsApp na mbadamba WiFi na-enweghị SIM
N'ebe a, nsogbu ahụ na-ebute ndị ọrụ ha anaghị eji kaadi SIM na mbadamba ha, nke ahụ bụ, ha enweghị kaadị ọzọ ma ọ bụ nọmba ọzọ nke iji rụọ ọrụ akaụntụ WhatsApp, yabụ anyị nwere nnukwu nsogbu. WhatsApp, abụghị ngwa multiplatform, ya bụ, anyị nwere ike ịnwe naanị ọnụọgụ na otu ngwaọrụ. Nhọrọ ọzọ bụ ịzụta a mbadamba ihe ndị China jiri 4G ma nye ya onu ogugu puru iche.
Nhọrọ mbu bu ibudata ihe omuma ndia site na Playlọ Ahịa Google, ha bụ ngwa nke n'ezie mmepụta oyiri WhatsApp Web ahịa, na ha ga-ahapụ anyị ka anyị jiri WhatsApp na mbadamba anyị, n'otu ụzọ ahụ si na ekwentị anyị, na otu kọntaktị na nọmba ekwentị anyị. Ihe dị mma banyere nke a bụ na ọ kachasị ọsọ ma dị mfe iji, naanị ị budata ngwa a site na njikọ a wee lelee koodu Bidi site na ngalaba ntọala WhatsApp na ama anyị, anyị ga-pịa "WhatsApp Web" na smartphone na-amalite nyocha.
Methodzọ nke ọzọ bụ Jiri WhatsApp Web mee ihe ozugbo, Anyị na-abanye www.web.whatsapp.com ma buru ụdị desktọọpụ nke ihe nchọgharị gam akporo anyị na-emebu. N'oge ahụ, anyị ga-enyocha koodu Bidi ma ọ ga-amalite ịrụ ọrụ dịka ọ na PC.
Etu esi enweta WhatsApp na ekwentị mkpanaaka gị na otu mbadamba n'otu oge
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-abịa n'ụlọ wee chefuo ekwentị gị kpamkpam wee họrọ maka mbadamba ahụ iji lelee netwọkụ mmekọrịta, ozi ịntanetị, nwee usoro Netflix ... mgbe ekwentị gị na-ada n'ihi na ị natara WhatsApp, ọ bụghị iwu na ị ga-ebili ka ị hụ onye nwere daring na-enye gị nsogbu n’oge izu ike gị.
Mgbe ha sitere na WhatsApp, ha ka na-eche ma ha ga-ebido ngwa ngwa ọtụtụ, nke na-enye ohere ịnweta akaụntụ WhatsApp site na ihe nchọgharị ma ọ bụ mbadamba na-enweghị ekwentị na-agbanye, nanị ihe ngwọta anyị nwere n'aka anyị nwere ike lelee WhatsApp site na mbadamba anyị ọ bụ site na ihe nchọgharị ahụ.
WhatsApp na-enye anyị ohere ịnweta WhatsApp anyị site na kọmputa site na ihe nchọgharị, ọ bụrụhaala a gbanyere ekwentị ama nwere ọnụEbe ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ dị ka a ga-asị na ọ bụ enyo, ihe niile enwetara ma zaa na ama ama gosipụtara na ụdị weebụ yana nke ọzọ.
para nwere WhatsApp na mkpanaka gị na mbadamba anyị ga-emerịrị usoro ndị a:
Nke mbụ, anyị ga-emeghe ihe nchọgharị anyị na-ejikarị na mbadamba nkume anyị ma nweta web.whatsapp.com. Akwadoro iji Firefox, Chrome ma ọ bụ Samsung Internet Browser ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịta ahụhụ site na nsogbu ọrụ.
Ọ bụrụ na egosighi ụdị weebụ ahụ nwere koodu QR, anyị na-enweta nhọrọ nchọgharị wee chọọ nhọrọ ahụ Rịọ saịtị desktọọpụ.
Ọzọ, anyị ga-ama ama na ohere anyị NchNhr> WhatsApp Web na igwefoto ga-arụ ọrụ. Dị n'okpuru QR koodu anyị na-ahụ nhọrọ akara aka na ndabara Nọgide na-abanye m. Don'tkwesighi iwepụ igbe ahụ ma ọ bụrụ na ịchọghị ị gafere usoro ahụ oge ọ bụla ịchọrọ ịnweta WhatsApp site na mbadamba.
N'ikpeazụ, anyị kwesịrị igosi igwefoto na ihuenyo nke mbadamba nkume anyị ka mara koodu QR na a na-egosi nkata niile ma gosipụta ya na ihe nchọgharị ahụ dị ka a ga-asị na ọ bụ ụdị weebụ maka kọmputa.
Ozugbo anyị ahazi WhatsApp na mbadamba nkume ahụ iji nwee ike ịnata ozi WhatsApp site na ama anyị na mbadamba, nke kachasị mma ga-abụ mepụta ụzọ desktọọpụ anyị mbadamba, ka mgbe niile nwere ya na aka na-enweghị ịchọ site na desktọọpụ ma ọ bụ ngwa drawer nke anyị mbadamba.
Iji mepụta ụzọ mkpirisi na ntanetị nke anyị na-eji iji nweta WhatsApp site na mbadamba anyị, anyị ga-pịa na menu nhọrọ nhọrọ ihe nchọgharị ma chọọ maka nhọrọ ahụ Tinye uzo mkpirisi na ibe. N'oge ahụ, a ga-agbakwunye ụzọ nweta kpọmkwem na desktọọpụ nke mbadamba anyị, ụzọ nnweta ga-emeghe ihe nchọgharị ndabara iji nweta akaụntụ WhatsApp dị ka a ga - asị na ọ bụ ngwa.
Usoro a ikwesighi ime ya oge obula na anyị chọrọ ịnweta ụdị WhatsApp anyị na mbadamba, naanị oge mbụ. Otu akụkụ nke anyị kwesịrị iburu n'uche banyere ọrụ a bụ na ọ bụrụ na site na ntọala ngwa ahụ, anyị mechiri nnọkọ weebụ niile nke WhatsApp, anyị ga-arụkwa usoro a ọzọ, WhatsApp ga-ewepụ ikike nke ọ nyere onye nchọgharị ka ekwe ohere site na ngwaọrụ ọzọ na-abụghị smartphone, n'ihi ya, anyị ga-redo usoro.